Otu esi etinye Node.JS 14/16 & NPM na Rocky Linux 8 - LinuxCapable
Otu esi etinye Node.JS 14/16 & NPM na Rocky Linux 8
October 30, 2021 August 29, 2021 by Jọshụa James
Wụnye Node.JS 14 na Appstream ma ọ bụ Isi Iyi
Wụnye Node.JS 14 site na Appstream
Wụnye Node.JS 14 site na Isi Iyi
Wụnye Node.JS 14 LTS site na Isi Iyi
Wụnye Node.JS 16 site na Isi Iyi
Otu esi emelite Node.JS 14, 14LTS & 16 Isi mmalite
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye Node.JS n'ụzọ dị iche iche site na iyi ngwa na ebe nchekwa node na Rocky Linux 8.
Akụkụ mbụ nke ịwụnye Node.JS ga-ekpuchi ụdị 14 na 14 LTS sitere na iyi Rocky Linux 8 App na nbudata na wụnye site na isi mmalite.
N'ozuzu, nyochaa ụdị Node.JS nke ị chọrọ; dị ka onye mmepụta, ọtụtụ ga-amaworị ajụjụ a; a na-atụ aro mgbe niile ka mmepe ogologo oge dabere na ụdị LTS dị ka nkesa Linux.
Iji wụnye node.js sitere na iyi Rocky Linux 8 App, buru ụzọ chọpụta ụdị nsụgharị dị ka ndị a:
Dị ka mmepụta na-egosi, node.js 10, 12, na 14 dị; Otú ọ dị, maka nke a, node.js ndabara modul iyi bụ ụdị 10, nke ị ga-agbanwe.
Akpa, tọgharịa dnf modul ndepụta nodejs repositories dị ka ndị a:
sudo dnf module reset -y nodejs
Iji mee ka ụdị 14 nwee ike, jiri iwu a:
sudo dnf module enable -y nodejs:14
Na-esote, tinye node.js site na iji ihe ndị a Iwu DNF:
Iji nyochaa nrụnye wee kwado ụdị nrụpụta NPM, jiri iwu a:
Nhọrọ nke abụọ bụ ịwụnye node.js site na Ebe nchekwa Nodesource, nke na-enye ụdị Node.JS 14 kachasị ọhụrụ.
Iji tinye Node.JS 14 site na isi mmalite, jiri ihe ndị a iwu iwu:
Na-esote, gbanye iwu dnf nrụnye dị ka ndị a iji wụnye node.js 14:
Dịka ị na-ahụ, iyi ngwa ndabara nwere ụdị node.js nke ochie agbanweela ka ọ bụrụ ụdị ọhụrụ.
Mara, ị ga-eme ya hụ ozi na-ekwu ndabara Agbanyụrụ iyi Linux App Rocky, na a ga-eji ebe nchekwa Nodesource ugbu a. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịlaghachi na iyi ngwa ndabara, jiri iwu a:
sudo dnf module enable -y nodejs
Nhọrọ nke atọ bụ ịwụnye Node.JS 14 LTS site na ebe nchekwa NodeSource. Ndị ọrụ ọhụrụ na ndị mmepe amaghị ihe LTS pụtara Nkwado Ogologo Oge na ọ bụ ụdị akwadoro maka ọtụtụ ndị ọrụ. Ahịrị ntọhapụ LTS na-elekwasị anya na nkwụsi ike, nkwado agbatị ma na-enye ikpo okwu a pụrụ ịdabere na ya maka ngwa ọ bụla. Ọtụtụ ndị ọrụ na ụlọ ọrụ Node.js nọ na ahịrị Nkwado Ogologo Oge.
Iji tinye Node.JS 14 LTS site na isi mmalite, jiri ihe ndị a iwu iwu:
sudo curl -fsSL https://rpm.nodesource.com/setup_lts.x | sudo bash -
Na-esote, gbanye iwu dnf nrụnye dị ka ndị a iji wụnye node.js LTS 14:
Iji wụnye Node.Js kacha ọhụrụ, ị ga-achọ ịwụnye node.js 16 site na isi iyi dị ka iyi Linux App nke Rocky anaghị egosipụta ụdị 16 ma. N'akụkụ gbakwunyere, ịwụnye node.js site na isi mmalite pụtara mgbe niile na ị nwere ihe nrụpụta kacha ọhụrụ.
Iji tinye Node.JS 16 site na isi mmalite, jiri ihe ndị a iwu iwu:
sudo curl -fsSL https://rpm.nodesource.com/setup_16.x | sudo bash -
Na-esote, gbanye iwu dnf nrụnye dị ka ndị a iji wụnye node.js 16:
Iji nyochaa nrụnye wee kwado ụdị nke node.js, jiri iwu a:
Ka imelite Node.JS, agbakwunyere ebe nchekwa ahụ na ebe nchekwa RPM gị, ebe ị nwere ike wepụ mmelite n'ọdịnihu, nke pụtara na ọ dịghị mkpa ka ị budata ọzọ oge ọ bụla mmelite ọhụrụ pụtara. Ka ịlele maka mmelite site na iji dnf update iwu:
Ọ bụrụ na mmelite dị, jiri ya dnf kwalite iwu:
Ịkwesịrị ịlele mmelite oge niile maka sistemụ gị niile, yabụ ị ga-ebulite mgbakwunye ọhụrụ ọ bụla ngwa ngwa.
N'ime nkuzi a, ị mụtala otu esi etinye Node.JS & NPM na sistemụ Rocky Linux 8 gị, na-ekpuchi iyi Node.JS 14 na atọ nke nhọrọ ụdị kachasị ọhụrụ site na NodeSource repository Node.JS 14, 14 LTS, na 16. N'ozuzu, ọtụtụ ndị mmepe ga-eji NodeSource repositories dabere na gburugburu ebe ị na-arụ ọrụ iji chọpụta ụdị nke ị ga-eji.
Categories Nkume linux Tags ọnụ, Nkume linux Mail igodo
Otu esi etinye Atom Text Editor na Debian 11